Ndị mepụtara Europe | KONGOLISOLO
Ozi oma diri ndi nwoke na nwoke inwe mmeko nwoke na nwanyi: ihe nwoke na nwanyi na - agha ide mmiri mgbe niile. anyị hụrụ ụdị di iche-iche, nha niile, agba niile na nwoke na nwanyị niile (nwoke na nwanyị)
Site na: KongoLisolona: June 2, 2020 21: 29 Enweghị asịsa
N'ọnọdụ ọ bụla, ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-emepe emepe na mpaghara a: ndị ụlọ ọrụ mmepụta ihe etinyewo ngwa ahịa dị egwu n'ahịa ọhụrụ, ngwa ọhụụ, ọ bụ ahịhịa ...	GỤKWUO
Everchọtala ụmụ agbọghọ na-acha ọcha na -egbu ikpere? Nke a bụ ezigbo ihe nzuzo echekwara na West "Mee ihe niile dị ka ụmụ nwanyị Black / Africa"
Site na: KongoLisolona: January 28, 2020 12: 50 Enweghị asịsa
Ọ bụ ezie na anyị, na-eme ákwà iji yie ndị ọcha. "Ndụ dị mgbagwoju anya" 9 na-achọ ka a gbanwee ka ọ ghọọ 6 na 6 na-achọ ịghọ 9.	GỤKWUO
Ndị a bụ ndị Blacks / ndị Africa na-agbaso dị ka ihe atụ na ihe atụ: nwa bebi enweghị ike dochie nwanyị sitere na nwanyị ... (VIDEO)
Site na: KongoLisolona: November 5, 2019 11: 00 Enweghị asịsa
Ọ dị mma ịnwe ihe nlere, mana ịchọrọ ịdị ka nke ọzọ bụ ịgọnarị onye nke gị. "Ezigbo ndị isi ojii / ndị Africa, achọla ihe nlereanya ị ga-eso na ndụ gị ....	GỤKWUO
Arne Pauwels na-echepụta friji anyanwụ na agụụ ụwa: ịgbagide agụụ ụwa anaghị abụkarị ihe na-abawanye mmepụta "Mbelata ihe oriri ma nyere aka ichekwa mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na ọnọdụ dị oke njọ na-arụ ọrụ nke ọma. ná mba ebe ndị mmadụ nwere ike inweta ọkụ eletrik ruo ebe a na-agaghị enweta mmiri ”
Site na: KongoLisolona: March 18, 2019 03: 00 Enweghị asịsa
Ebere iji nyere ndị ọrụ ugbo aka na ndị nọ ná mba ndị ka na-emepe emepe, Wakati bụ ebe a na-ejighị ọgwụgwọ, nke ike anyanwụ na-arụ ọrụ nke nwere ike inye aka mee ka ihe ọhụrụ dị ọhụrụ.	GỤKWUO
Edmond Albius: ohu, site na Reunion (France) bụ onye chọpụtara na 1841 usoro nke njikọta fertilization nke vanilla "Maka ndị na-amaghị (Edmond) amụrụ ohu na (ụmụ mgbei), na 1829 onye nwe ụlọ Holy Suzzane na nwụrụ na otu obodo na August 8 1880 "
Site na: KongoLisolona: November 29, 2018 07: 00 Enweghị asịsa
Onye nwe ya na-enye nwanne ya nwoke, Ferréol Beaumont Béliers, onye nwekwa na Sainte-Suzanne ma nwee agụụ maka ahụ ọkụkọ. Ferréol Beaumont Béliers na-eme ya onye na-elekọta ubi…	GỤKWUO
Aug08 10: 16